新住民培力發展資訊網 - 緬甸 - နောကျဆုံးရသတငျးhttp://ifi.immigration.gov.tw新住民培力發展資訊網 - 緬甸 - နောကျဆုံးရသတငျးenSat, 29 Feb 2020 13:59:49 GMT20 ထိုင်ဝမ်သို့လာရောက်ရန်ကန့်သတ်ချက်များ စာရင်း (0225) http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18681&ctNode=36622&mp=ifi_my
]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Tue, 25 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18681 ထိုင်ဝမ်သို့လာရောက်ရန်ကန့်သတ်ချက်များ စာရင်း 2.16.886.101.20003.20001.32985 ထိုင်ဝမ်သို့လာရောက်ရန်ကန့်သတ်ချက်များ စာရင်း 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Tue, 25 Feb 2020 16:00:00 GMT-Sat, 25 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Wed, 26 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18681 【2လ24ရက်နောက်ဆုံးသတင်း】တောင်ကိုရီးယားခရီးသွားကပ်ရောဂါ တတိယဆင့်သတိပေးချက်အဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကြံပြုသည်မှာ 「2019 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19)」ကပ်ရောဂါနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက် လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်မှုအစီအမံ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18671&ctNode=36622&mp=ifi_my 2.16.886.101.20003.20001.20052 Mon, 24 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18671 【2လ24ရက်နောက်ဆုံးသတင်း】တောင်ကိုရီးယားခရီးသွားကပ်ရောဂါ တတိယဆင့်သတိပေးချက်အဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကြံပြုသည်မှာ 「2019 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19)」ကပ်ရောဂါနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက် လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်မှုအစီအမံ 2.16.886.101.20003.20001.32985 【2လ24ရက်နောက်ဆုံးသတင်း】တောင်ကိုရီးယားခရီးသွားကပ်ရောဂါ တတိယဆင့်သတိပေးချက်အဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကြံပြုသည်မှာ 「2019 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19)」ကပ်ရောဂါနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက် လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်မှုအစီအမံ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Mon, 24 Feb 2020 16:00:00 GMT-Fri, 24 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Wed, 26 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18671 ထိုင်ဝမ်သို့လာရောက်ရန်ကန့်သတ်ချက်များ စာရင်း (0214) http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18581&ctNode=36622&mp=ifi_my
]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 13 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18581 ထိုင်ဝမ်သို့လာရောက်ရန်ကန့်သတ်ချက်များ စာရင်း 2.16.886.101.20003.20001.32985 ထိုင်ဝမ်သို့လာရောက်ရန်ကန့်သတ်ချက်များ စာရင်း 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Thu, 13 Feb 2020 16:00:00 GMT-Mon, 13 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 16 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18581 2လ 6ရက်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံအားလုံး(ဟောင်ကောင်၊ မကာအိုအပါအဝင်)ဒုတိယဆင့် ကပ်ရောဂါဒေသစာရင်းသွင်းသည်၊ တရုတ်ပြည်နယ်၊မြို့အသီးသီးတွင်နေထိုင်သူများ ပြည်ဝင်ခွင့်ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18526&ctNode=36622&mp=ifi_my 2.16.886.101.20003.20001.20052 Tue, 04 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18526 2လ 6ရက်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံအားလုံး(ဟောင်ကောင်၊ မကာအိုအပါအဝင်)ဒုတိယဆင့် ကပ်ရောဂါဒေသစာရင်းသွင်းသည်၊ တရုတ်ပြည်နယ်၊မြို့အသီးသီးတွင်နေထိုင်သူများ ပြည်ဝင်ခွင့်ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 2လ 6ရက်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံအားလုံး(ဟောင်ကောင်၊ မကာအိုအပါအဝင်)ဒုတိယဆင့် ကပ်ရောဂါဒေသစာရင်းသွင်းသည်၊ တရုတ်ပြည်နယ်၊မြို့အသီးသီးတွင်နေထိုင်သူများ ပြည်ဝင်ခွင့်ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Tue, 04 Feb 2020 16:00:00 GMT-Sat, 04 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 09 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18526 (109)ခုနှစ် 2လ 7ရက်မှစ၍ 14ရက်တွင်းဝင်ရောက်(သို့)နေထိုင်ခဲ့ကြသောပြည်မကြီး နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ဗီဇာထိန်းချုပ်မှုအစီ အမံများကိုဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18517&ctNode=36622&mp=ifi_my 2.16.886.101.20003.20001.20052 Tue, 04 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18517 (109)ခုနှစ် 2လ 7ရက်မှစ၍ 14ရက်တွင်းဝင်ရောက်(သို့)နေထိုင်ခဲ့ကြသောပြည်မကြီး နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ဗီဇာထိန်းချုပ်မှုအစီ အမံများကိုဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 (109)ခုနှစ် 2လ 7ရက်မှစ၍ 14ရက်တွင်းဝင်ရောက်(သို့)နေထိုင်ခဲ့ကြသောပြည်မကြီး နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ဗီဇာထိန်းချုပ်မှုအစီ အမံများကိုဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Tue, 04 Feb 2020 16:00:00 GMT-Sat, 04 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 06 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18517 2လ6ရက်တွင်မျက်နှာဖုံးကိုပြည်သူများကျန်းမာရေးအာမခံကဒ်နှင့်ဝယ်နိုင်သည် http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18501&ctNode=36622&mp=ifi_my 2.16.886.101.20003.20001.20052 Tue, 04 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18501 2လ6ရက်တွင်မျက်နှာဖုံးကိုပြည်သူများကျန်းမာရေးအာမခံကဒ်နှင့်ဝယ်နိုင်သည် 2.16.886.101.20003.20001.32985 2လ6ရက်တွင်မျက်နှာဖုံးကိုပြည်သူများကျန်းမာရေးအာမခံကဒ်နှင့်ဝယ်နိုင်သည် 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Tue, 04 Feb 2020 16:00:00 GMT-Sat, 04 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Wed, 05 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18501 2လ 5ရက်မှစ၍ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်အားဒုတိယဆင့်ကပ်ရောဂါဒေသအဖြစ်သတ်မှတ် သည်၊ ခရီးသွားသမိုင်းရှိသူသည် ဝင်ရောက်ပြီးနောက်အိမ်တွင်ရောဂါခြေချုပ်ဖို့လိုသည်။ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18510&ctNode=36622&mp=ifi_my 2.16.886.101.20003.20001.20052 Mon, 03 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18510 2လ 5ရက်မှစ၍ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်အားဒုတိယဆင့်ကပ်ရောဂါဒေသအဖြစ်သတ်မှတ် သည်၊ ခရီးသွားသမိုင်းရှိသူသည် ဝင်ရောက်ပြီးနောက်အိမ်တွင်ရောဂါခြေချုပ်ဖို့လိုသည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 2လ 5ရက်မှစ၍ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်အားဒုတိယဆင့်ကပ်ရောဂါဒေသအဖြစ်သတ်မှတ် သည်၊ ခရီးသွားသမိုင်းရှိသူသည် ဝင်ရောက်ပြီးနောက်အိမ်တွင်ရောဂါခြေချုပ်ဖို့လိုသည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Mon, 03 Feb 2020 16:00:00 GMT-Fri, 03 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 06 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18510 ဝိန်းကျိုးမြို့ကိုဒုတိယဆင့်ကပ်ရောဂါဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ပြည်သူများ ခရီးသွားသမိုင်း ရှိသူများအိမ်တွင်ရောဂါခြေချုပ်ရန်လိုအပ်သည် http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18489&ctNode=36622&mp=ifi_my
]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 02 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18489 ဝိန်းကျိုးမြို့ကိုဒုတိယဆင့်ကပ်ရောဂါဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ပြည်သူများ ခရီးသွားသမိုင်း ရှိသူများအိမ်တွင်ရောဂါခြေချုပ်ရန်လိုအပ်သည် 2.16.886.101.20003.20001.32985 ဝိန်းကျိုးမြို့ကိုဒုတိယဆင့်ကပ်ရောဂါဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ပြည်သူများ ခရီးသွားသမိုင်း ရှိသူများအိမ်တွင်ရောဂါခြေချုပ်ရန်လိုအပ်သည် 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Sun, 02 Feb 2020 16:00:00 GMT-Thu, 02 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Wed, 05 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18489 တရုတ်ပြည်မကြီးကွမ်တုံပြည်နယ်တွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါသစ်ဆက်တိုက်မြှင့် တက်လာမှုကို တုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဗဟိုကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဌာနက မနက်ဖြန်မှစ၍ ဒုတိယ ဆင့်ကပ်ရောဂါဒေသတွင်ထည့်သွင်းမည်၊ ဝင်ထွက်သည့်ပြည်သူများကွမ်တုံခရီးသွားသမိုင်းရှိပါက အိမ်တွင် ရောဂါခြေချုပ်ထားဖို့လိုသည်။ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18416&ctNode=36622&mp=ifi_my 2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 02 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18416 တရုတ်ပြည်မကြီးကွမ်တုံပြည်နယ်တွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါသစ်ဆက်တိုက်မြှင့် တက်လာမှုကို တုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဗဟိုကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဌာနက မနက်ဖြန်မှစ၍ ဒုတိယ ဆင့်ကပ်ရောဂါဒေသတွင်ထည့်သွင်းမည်၊ ဝင်ထွက်သည့်ပြည်သူများကွမ်တုံခရီးသွားသမိုင်းရှိပါက အိမ်တွင် ရောဂါခြေချုပ်ထားဖို့လိုသည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 တရုတ်ပြည်မကြီးကွမ်တုံပြည်နယ်တွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါသစ်ဆက်တိုက်မြှင့် တက်လာမှုကို တုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဗဟိုကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဌာနက မနက်ဖြန်မှစ၍ ဒုတိယ ဆင့်ကပ်ရောဂါဒေသတွင်ထည့်သွင်းမည်၊ ဝင်ထွက်သည့်ပြည်သူများကွမ်တုံခရီးသွားသမိုင်းရှိပါက အိမ်တွင် ရောဂါခြေချုပ်ထားဖို့လိုသည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Sun, 02 Feb 2020 16:00:00 GMT-Thu, 02 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Mon, 03 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18416 တရုတ်ပြည်မကြီး၏ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါသစ်ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဗဟို ကူးစက်ရောဂါဌာနချုပ်မှ ထိုင်ဝမ်သို့လာမည့်ပြည်မကြီးပြည်သူများကိုကန့်သတ်ထားသည်။ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18370&ctNode=36622&mp=ifi_my 2.16.886.101.20003.20001.20052 Fri, 31 Jan 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18370 တရုတ်ပြည်မကြီး၏ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါသစ်ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဗဟို ကူးစက်ရောဂါဌာနချုပ်မှ ထိုင်ဝမ်သို့လာမည့်ပြည်မကြီးပြည်သူများကိုကန့်သတ်ထားသည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 တရုတ်ပြည်မကြီး၏ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါသစ်ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဗဟို ကူးစက်ရောဂါဌာနချုပ်မှ ထိုင်ဝမ်သို့လာမည့်ပြည်မကြီးပြည်သူများကိုကန့်သတ်ထားသည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Fri, 31 Jan 2020 16:00:00 GMT-Tue, 31 Jan 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Fri, 31 Jan 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18370 တရုတ်ပြည်မကြီးဝူဟန့်တွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါဆက်လက်ဖြစ်ပွားသည်ကို အတည်ပြုခဲ့သည်၊ဝူဟန့်နှင့်အနီးအနားရှိဒေသများသို့သွားလာသူများအား မိမိကိုယ်တိုင် ကာကွယ်မှုအစီအမံများနှင့်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပိုမိုအားကောင်းစေရန်တိုက်တွန်းပါ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18494&ctNode=36622&mp=ifi_my 2.16.886.101.20003.20001.20052 Tue, 21 Jan 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18494 တရုတ်ပြည်မကြီးဝူဟန့်တွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါဆက်လက်ဖြစ်ပွားသည်ကို အတည်ပြုခဲ့သည်၊ဝူဟန့်နှင့်အနီးအနားရှိဒေသများသို့သွားလာသူများအား မိမိကိုယ်တိုင် ကာကွယ်မှုအစီအမံများနှင့်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပိုမိုအားကောင်းစေရန်တိုက်တွန်းပါ 2.16.886.101.20003.20001.32985 တရုတ်ပြည်မကြီးဝူဟန့်တွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါဆက်လက်ဖြစ်ပွားသည်ကို အတည်ပြုခဲ့သည်၊ဝူဟန့်နှင့်အနီးအနားရှိဒေသများသို့သွားလာသူများအား မိမိကိုယ်တိုင် ကာကွယ်မှုအစီအမံများနှင့်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပိုမိုအားကောင်းစေရန်တိုက်တွန်းပါ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Tue, 21 Jan 2020 16:00:00 GMT-Sat, 21 Jan 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Wed, 05 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18494 နိုင်ငံခြားထွက်လျှင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မငြိ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှနွေဦးရာသီပွဲတော် ရှင်းလင်းရေး 566 အစီအစဉ်ကိုစတင်ခြင်း http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18351&ctNode=36622&mp=ifi_my
]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Tue, 21 Jan 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18351 နိုင်ငံခြားထွက်လျှင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မငြိ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှနွေဦးရာသီပွဲတော် ရှင်းလင်းရေး 566 အစီအစဉ်ကိုစတင်ခြင်း 2.16.886.101.20003.20001.32985 နိုင်ငံခြားထွက်လျှင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မငြိ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှနွေဦးရာသီပွဲတော် ရှင်းလင်းရေး 566 အစီအစဉ်ကိုစတင်ခြင်း 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Tue, 21 Jan 2020 16:00:00 GMT-Sat, 21 Jan 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Tue, 21 Jan 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18351 【သုံးစွဲသူကာကွယ်ရေးအကြောင်းအရာ】 သုံးစွဲသူအခွင့်အရေးကိုဂရုပြုပါ၊ ကာကွယ်ရေးလိုင်းကို သတိရပါ။ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18704&ctNode=36622&mp=ifi_my
သုံးစွဲသူက အရောင်းဝန်ထမ်းမှ စာချုပ်ပြန်လည်ရောင်းချရာတွင် ကူညီနိုင်သည်ဟုဖုန်းလာသည်။ ပြန်မရောင်းမီ စင်နေရာများကိုအရင်ဝယ်ရမည်ဟုပြောသည်၊ ဈေးကွက်ကိုနားမလည်၊ စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်စိတ်အားထက်သန်သောကြောင့် အခြားသူအားယုံကြည်သည်၊ အရိုးစင်နေရာ4ခု ဝယ်ခဲ့သော်လည်း လပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခြင်းမရှိပါ။ နောက်ထပ်သုံးစွဲသူတစ်ဦးကအေဂျင်စီက အစောပိုင်းနှစ်တွေမှာသူတို့ဝယ်ခဲ့သည့်4ခုကိုကိုယ်စားရောင်းနိုင်သည်ဟုဆိုသည်၊ ဝယ်သူက ဈေးဖွင့်ပြီးပြီလို့ ပြောပေမယ့် 4ခုထပ်ဝယ်စာချုပ်ချုပ်မှသာလုံးလုံး ရောင်းချသည်၊ အပြီးမသတ် နိုင်သောကြောင့် နှစ်ဖက်လုံးကထပ်တွေ့ရန်သဘောတူခဲ့သည်၊ အရိုးပြာအိုး4ခုထပ်ဝယ်သင့် ကြောင်းတောင်းဆိုသည်၊ ငွေလိမ်လည်မှုလို့သံသယရှိသည်။
a. အသုဘအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကြေငြာချက်အရ အသုဘ ဝန်ဆောင်မှုအဆိုပါပုံစံစာချုပ်မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်သည်နှင့် ကိစ္စရပ်များကိုမှတ်တမ်း မတင်ရ၊ တရားဝင်တည်ထောင်ထားသောအသုဘဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသာ စာချုပ်ကို ရောင်းချနိုင်ပြီး ယုံကြည်အပ်နှံငွေ75%ကို ကြိုတင်ပေးရမည်။စာချုပ်မချုပ်မီ သုံးစွဲသူများ သည် စာချုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ကာလကို အနည်းဆုံး5ရက်ပေးသင့်သည်၊ သုံးစွဲသူသည် စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့မှ14ရက်တွင်းစာဖြင့်ရေးသားဖျက်သိမ်းနိုင်သည်၊ အသုဘ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ငွေအပြည့်ပြန်အမ်းရမည်၊ လက်မှတ်ထိုးသည့်နေ့မှ14ရက် နောက် ပိုင်း စာချုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းလျှင် စာချုပ်ပါအချိုးအစားအရပြန်အမ်းရမည်၊သို့သော် စုစုပေါင်း ပမာဏ၏80%ထက် မနည်းစေရ။
b. အသုဘအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကြေငြာထားသည့် အရိုးပြာ (အရိုးစု)သိုလှောင်၊ရောင်း၊ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာစာချုပ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရမည်နှင့်ကိစ္စရပ်များမတင်သင့်ပါ၊ တရားဝင်အသုဘဝန်ဆောင်မှုပေးသူများက အရိုးစင်နေရာကိုသာရောင်းနိုင်သည်၊ စာချုပ်မချုပ်မီ ပြန်လည်သုံးသပ်ကာလအနည်းဆုံး5ရက်ပေးသင့်သည်၊ သုံးစွဲသူသည် လက်မှတ် ထိုးသည့်နေ့မှ14ရက်တွင်းစာချုပ်ဖျက်သိမ်းပါက အသုဘဝန်ဆောင်ပေးသူသည် ငွေအပြည့်ပြန် အမ်းရမည်ဖြစ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးသည့်နေ့မှ14ရက်နောက်ပိုင်းစာချုပ်ရပ်စဲပါက ဝန်ဆောင်မှုပေး သူသည် စာချုပ်ပါအချိုးရာခိုင်နှုန်းယူနိုင်သည်၊သို့သော် စုစုပေါင်းဈေးနှုန်း၏40% ထက်မပိုရ။
c. သုံးစွဲသူမှ ကိုယ်တိုင်(သို့)မိသားစုအတွက်ကြိုတင်စီစဉ်ရန် ဝယ်လိုပါက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားအသုဘသတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ဝင်ရောက်၍ တရားဝင်လုပ်ငန်း ရှင်များ၊ဝန်ဆောင်မှုများ၊အခကြေးငွေနှင့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများစသည့် အသေးစိတ် တိုင်ပင် ပါ၊ စာချုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ကာလကို ကောင်းစွာအသုံးချ၍ သေချာဖတ်ပြီးလိုအပ်ချက် ကိုက်ညီမှု ရှိမှသာဝယ်ပါ၊ကြိုတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း (သို့) အရိုးစင်နေရာဝယ်ယူခြင်းကို မိမိကိုယ်တိုင်သုံး မည့်ပေါ်အခြေခံသင့်သည်၊ပွဲစားဆိုသော မူလစာချုပ်(သို့)အရိုးစင်နေရာရောင်းရန်ကူညီနိုင် သည် ၊သို့သော်အရင်ဝယ်ယူရန်လိုသည်၊ အစုံလိုက်ရောင်းချခြင်း(သို့) ပြန်လည်ရောင်းချ၍ အမြတ်ရနိုင်သည် စသည့်စကားလုံးများမယုံပါနှင့်၊ ရင်းနှီးမြ ပ်နှံမှုအတွေးဖြင့် အမြောက်အများ ဝယ်ယူခြင်း၊ အငြင်းပွားဖွယ်များကိုရှောင်ရှားပါ။
二、ဝိတ်ချတာ၊ ကြည့်နားထောင်တာရပ်၊သေချာစဉ်းစားပြီးစာချုပ်ကိုရှင်းလင်းစွာကြည့်ပြီးမှ လက်မှတ်ထိုးပါ
သုံးစွဲသူတွေက ဈေးဝယ်စဉ်ယွမ်300တန်အရေပြားထိန်းသိမ်းမှုကူပွန်ရောင်းတယ်၊ မျက်နှာလုပ် တာခံစားနိုင်မယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်၊ မျက်နှာလုပ်ငန်းစဉ်တွင်း ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်းများရောင်းချ သည်၊ စီးပွားရေးအခြေအနေမတတ်နိုင်၍ လုပ်ငန်းရှင်မှအထူးလျှော့ဈေး72,000၊ တစ်လလျှင် 3,000ယွမ်ခွဲပေးနိုင်သည်၊ ဝယ်ယူစာချုပ်ရန်အတင်းပြော၍ ငြင်းဆန်ဖို့အခက်တွေ့စေသည်၊ 3ကြိမ်အသုံးပြုပြီးနောက် အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ လစဉ်ချေးငွေပမာဏကို မတတ်နိုင်သောကြောင့် စာချုပ်ရပ်ဆိုင်းပြီးပြန်အမ်းလိုသည်၊လုပ်ငန်း ရှင်ကလည်းသဘောတူသည်၊သို့သော်အမ်းငွေတွက်ချက်နည်းလမ်းသည် ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်မှု မရှိပါ။
a.ပြန်မွမ်းမံခြင်းမပြုမီ ကျန်းမာရေးဌာနကြေငြာချက်အရှဝိတ်ချတာနှင့်ပတ်သက်သည့်စာချုပ် မှတ်တမ်းတင်သင့်သည်နှင့် ကိစ္စရပ်များကိုမှတ်တမ်းမတင်ရ ပုဒ်မ10တွင် ဝိတ်ချသင်တန်း အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက် စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းလျှင်၊ ရပ်စဲသည့်နေ့မ30ရက်အတွင်း၊ ရရှိသောဝန်ဆောင်ခ၊ ထုတ်ယူပြီးဖွင့်လိုက်သောကုန်ပစ္စည်းငွေ၊စာချုပ်ရပ်ဆိုင်းကြေးတို့ကို စုစုပေါင်းမှနှုတ်ပြီး သုံးစွဲသူကိုပြန်အမ်းပါ၊ကျန်ရှိသောပမာဏ၏10% အောက်ဖြစ်သည်။ စာချုပ် ရပ်ဆိုင်းကြေးကို သဘောမတူပါက လုပ်ငန်းရှင်သည်ရပ်ဆိုင်းကြေးကိုမနှုတ်ရ။ ထပ်မံဖြည့်စွက် ထားသောကုန်ပစ္စည်း၊ ထုတ်ယူပြီးဖွင့်လိုက်သောပစ္စည်းများ၊အသုံးပြုရန် အတွက်ဖွင့် ထားသော အသေးဆုံးပစ္စည်းကိုဆိုသည်၊အသေးဆုံးပစ္စည်းတွေကိုမဖွင့်ဘဲ အစုံလိုက်(သို့) အုပ်စုလိုက် ရောင်းချသည်။ ရရှိသောဝန်ဆောင်မှုနှင့် ထုတ်ယူဖွင့်ပြီးပစ္စည်းတန်ဖိုး၊စာချုပ်ပါဈေးနှုန်းပေါ် မူတည်၊သဘောတူထားသည့်ယူနစ်ဈေးနှုန်းမရှိလျှင်၊ ပျမ်းမျှ (သို့)ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးပေါ် မူတည်သည်။ ဝိတ်ချသင်တန်းဝယ်ယူပြီးနောက်စာချုပ်ရပ်ဆိုင်းလိုသူသည် အထက်ပါစည်းမျဉ်း များအတိုင်း ဖွင့်၍အသုံးပြုပြီးပစ္စည်းတန်ဖိုးနှင့်ဝန်ဆောင်ခလက်ခံပြီးနောက် ကျန်ငွေ ကိုပြန်အမ်း မည်။
b.ထောင်ရွမ်မြို့အစိုးရသုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာက ဝိတ်ချသင်တန်းမဝယ်မီပိုမေးမြန်းလေ့လာ ဝယ်ယူရန်၊ ဝိတ်ချသဘောတူစာချုပ်ပုံစံကို အခြေခံ၍စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် သုံးစွဲသူများအား သတိ ပေးသည်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ကာလ7ရက်ကို ကောင်းစွာအသုံးချပြီး စာချုပ်တွင်ဝယ်ထားသော သင်တန်းချိန်၊အကြိမ်အရေအတွက်၊ပမာဏ၊ဈေးနှုန်းများကိုဖတ်ပါ၊ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်း အရာနှင့် အလှကုန်များသည် လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်ငွေပေးချေနိုင်စွမ်းရှိမှစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးပါ၊ အရောင်းမြှင့်တင်မှုကြောင့် ခရက်ဒစ်ကဒ်(သို့)အရစ်ကျဝယ်ယူသည့်နည်းဖြင့် အလျင်စလို မဝယ်ပါနှင့်၊ ဝယ်ထားသောပစ္စည်းများအမှန်တကယ်သုံးစွဲမည့်ပမာဏကိုဖွင့်ပါ၊ အခွင့်အရေးအကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိရန် မလိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးဖို့မဖွင့်ပါနဲ့၊ ထို့ပြင်အကယ်၍သင်သည်မျှော်လင့် မထားသောအရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းကြောင့်ဝယ်ယူပါက သုံးစွဲသူကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေပုဒ်မ19 အရ 7ရက်တွင်းပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ပေးပို့နိုင်သည် (သုိ့)စာဖြင့်ရေးသားထားသော စာချုပ်အားဖျက်သိမ်းနိုင်သည် (မှတ်တမ်းစာကိုသုံရန် အကြံပြုပါသည်)စာချုပ်ရပ်စဲခြင်းအသိပေးစာ၊သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍သင့်တွင်မေးမြန်းရန်ရှိပါက 1950 သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုလိုင်းသို့ ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
三、ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာအသင်းဝင်(သို့)နည်းပြသင်တန်းစာချုပ်မချုပ်ခင် သေချာစွာဖတ်ပါ အလျင်မလိုပါနှင့်။
အချို့သုံးစွဲသူများက ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာအသင်းဝင်ပြီးနောက် နောက်ထပ်နည်းပြ သင် တန်3း0ကိုဝယ်ကြသည်၊မူလသင်တန်းတောင်မပြီးသေး နည်းပြ၏ပရိုမိုးရှင်းကြောင့် နောက်ထပ် 30ကိုဝယ်ခဲ့သည်၊နောက်ပိုင်းသင်တန်းတက်ဖို့အချိန်မရှိ၊ သင်တန်းသားများစွာရှိသောကြောင့် အချိန်ညှိမရ၊ မတက်ရသေးသောသင်တန်းကြေးကိုဖျက်သိမ်းရန်လိုသည်၊ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး စင်တာ၏ဖျက်သိမ်းမှုတွက်ချက်နည်းဆီလျော်မှုမရှိပါ။
a.ပြန်မွမ်းမံခြင်းမပြုမီအမျိုးသားအားကစားကော်မတီမှကြေငြာ 「ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာ၏ စာချုပ်မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်သည်နှင့်ကိစ္စရပ်များကိုမှတ်တမ်းမတင်ရ။」 သုံးစွဲသူစင်တာ အသင်းဝင်ပြီးနောက် စာချုပ်သက်တမ်းမကုန်မီအချိန်မရွေးရပ်ဆိုင်းစဉ်၊ အစောပိုင်းရပ်စဲစဉ် လုပ်ငန်းရှင်မှသုံးစွဲသူမှပေးဆောင်ရသောအခကြေးငွေအားလုံး၏လက်ကျန်ငွေကို လုပ်ငန်းရှင် သည် အောက်ပါနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြင့်ပြန်အမ်းရမည်။：一、နုတ်ယူခြင်းမှာ စာချုပ်ချုပ် ဆိုစဉ် လစဉ်အသုံးပြုခကိုအမှန်တကယ်သုံးသည့်လအရေအတွက်ဖြင့်မြှောက်သည် (၁၅ရက် ထက်နည်းလျှင် ၊ လတစ်ဝက်၊ ၁၅ရက်ထက်ပိုလျှင်တစ်လအဖြစ် တွက်ချက်သည်။) 二、စာချုပ် ချုပ်စဉ်လစဉ်အသုံးပြုခသတ်မှတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါက သုံးစွဲသူမှပေးဆောင်သောအဖိုးအခကို စာချုပ်ကာလနှင့်အညီပြန်အမ်းငွေအဖြစ်ပြန်အမ်းပါ၊ ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် လျော်ကြေးပေးရန် လုပ်ငန်းရှင်သည်ပြန်အမ်းငွေ၏ရာခိုင်နှုန်းအချို့ ( ပြန်အမ်းငွေပမာဏ၏၂၀% ထက်မပို)အပေါ် အခြေခံတွက်ချက်၍ ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တောင်းဆို နိုင်သည်။ 三、ကိုယ်ပိုင်နည်းပြသင်တန်း：သုံးစွဲသူနှင့်မသက်ဆိုင်သော (ဥပမာ-လုပ်ငန်းရှင်မှထုတ်ပယ်ခြင်း(သို့)နည်းပြနုတ်ထွက်ခြင်း) စာချုပ်ဖျက်သိမ်းသူများ၊ စာချုပ်စဉ်သင်ခန်းစာတစ်ခု၏အခကြေးငွေနှင့် တကယ်အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်ဖြင့်မြှောက်ပါ။အကယ်၍ စာချုပ်စဉ်သင်ခန်းစာတစ်ခု၏ကုန်ကျစရိတ်ကို ဆုံးဖြတ် ရန် မဖြစ်နိုင်ပါကစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို စုစုပေါင်းသင်တန်းအရေအတွက်ဖြင့်စားပါ။ သုံးစွဲသူ များအနေဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်အပြည့်ပေါ်အခြေခံ၍ ဖျက်သိမ်းကြေး ရာခိုင်နှုန်းကိုထပ်မံတောင်းခံ နိုင်သည်။
b.ထောင်ရွမ်မြို့အစိုးရသုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာက ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာအသင်းဝင် စာ ချုပ်မဝယ်မီစင်တာ၏ငွေလက်ခံသည့်နည်းလမ်း၊မူလဈေးနှုန်းနှင့်ဦးစားပေးဈေးနှုန်း၊ စာချုပ်၏ သက်တမ်းနှင့်စာချုပ်အစောပိုင်းရပ်စဲခြင်းအတွက်ဒဏ်ကြေးတွက်ချက်နည်းလမ်းစသည်တို့ လိုတာသေချာမှဝယ်ပါ၊အရောင်းမြှင့်တင်မှုကြောင့်စာချုပ်ကိုအလျင်စလိုမချုပ်ပါနှင့် ဟုသတိပေး ပြောကြားသည်။အသင်းဝင်ပြီးနောက်သင်ကိုယ်ပိုင်နည်းပြသင်တန်းများ ဝယ်ရန်လိုအပ်ပါက သင်ကိုယ်ပိုင်အချိန်နှင့်ခွန်အားကိုလည်းတိုင်းတာသင့်သည်၊ အဆုံးထိမသုံးခြင်းကြောင့်ပြန်အမ်း ငွေနှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ခင်မင်မှု ဖိအား(သို့)ရောင်းအားအောက်တွင် နည်းပြသင်တန်းကိုများများမဝယ်ပါနှင့်၊ ထို့ပြင်စင်တာတွင်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိသည်၊ အသင်းဝင်ရန်လိုအပ်သောသူများမှအပ တစ်ကြိမ်အခကြေးငွေ ကောက်ခံသူများလည်း ရှိသည်၊ သုံးစွဲသူများအား သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ပိုမိုနားလည်ရန်နှင့်တစ်ဦးချင်း လိုအပ်ချက်နှင့်အညီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်သင့်တော်သောနေရာများကို ရွေးချယ်ရန် အကြံပေး သည်။
ပိုများသောအမှုများကို ထောင်ရွမ်မြို့အစိုးရဥပဒေရေးရာဌာန၊ ထိုင်ပေမြို့အစိုးရဥပဒေရေးရာဌာန တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဆက်သွယ်ရေး၊အွန်လိုင်းဈေးဝယ်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းများ၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ပညာရေး ထိန်းသိမ်းခြင်း၊အပန်းဖြေခရီး၊ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊အလှအပ၊ဆေးဝါး၊ဘဏ္ဍာရေးအာမခံ၊အိမ်ခြံ မြေ၊အစားအစာ၊ကြိုတင်ငွေဖြည့်ငွေပေးငွေယူမှုများ၊ ပညာရေးမြှင့်တင်ရေး၊ အခြေခံ အခွင့် အရေးများနှင့်ဆက်စပ်သော သုံးစွဲသူအငြင်းပွားမှုကို ကာကွယ်ရန်မဝယ်မီသက်ဆိုင်ရာ Q＆A ကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။
အကယ်၍သင်သည်စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ(သို့)အငြင်းပွားမှုကို ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် လုပ် ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းစွာမသိပါကစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေQ＆Aတွင် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုနားလည်ရန် ရှာဖွေနိုင်သည်။
]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 19 Jan 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18704 【သုံးစွဲသူကာကွယ်ရေးအကြောင်းအရာ】 သုံးစွဲသူအခွင့်အရေးကိုဂရုပြုပါ၊ ကာကွယ်ရေးလိုင်းကို သတိရပါ။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 【သုံးစွဲသူကာကွယ်ရေးအကြောင်းအရာ】 သုံးစွဲသူအခွင့်အရေးကိုဂရုပြုပါ၊ ကာကွယ်ရေးလိုင်းကို သတိရပါ။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Sun, 19 Jan 2020 16:00:00 GMT-Thu, 19 Jan 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Wed, 26 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18704 အင်ဒိုနီးရှားတွင်ဦးဆုံးအာဖရိကဝက်နာဖြစ်ပွားမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်၊12လ13ရက်မွန်း လွှဲ2နာရီမှစ၍ အင်ဒိုနီးရှားမှတားမြစ်ဝက်သားထုတ်ကုန်သယ်လာသည့် ခရီးသည်များကို ဖမ်းဆီးရမိပြီး ထိုင်ဝမ်ငွေ20သောင်းဒဏ်ချခဲ့သည်။ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18423&ctNode=36622&mp=ifi_my
]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 12 Jan 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18423 အင်ဒိုနီးရှားတွင်ဦးဆုံးအာဖရိကဝက်နာဖြစ်ပွားမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်၊12လ13ရက်မွန်း လွှဲ2နာရီမှစ၍ အင်ဒိုနီးရှားမှတားမြစ်ဝက်သားထုတ်ကုန်သယ်လာသည့် ခရီးသည်များကို ဖမ်းဆီးရမိပြီး ထိုင်ဝမ်ငွေ20သောင်းဒဏ်ချခဲ့သည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 အင်ဒိုနီးရှားတွင်ဦးဆုံးအာဖရိကဝက်နာဖြစ်ပွားမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်၊12လ13ရက်မွန်း လွှဲ2နာရီမှစ၍ အင်ဒိုနီးရှားမှတားမြစ်ဝက်သားထုတ်ကုန်သယ်လာသည့် ခရီးသည်များကို ဖမ်းဆီးရမိပြီး ထိုင်ဝမ်ငွေ20သောင်းဒဏ်ချခဲ့သည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Sun, 12 Jan 2020 16:00:00 GMT-Thu, 12 Jan 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Mon, 03 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18423 【လိမ်လည်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဓိကအကြောင်းအရာ】ကိုဂရုပြုပါ!! ပိုအေးဆေးတည်ငြိမ် စွာ လိမ်လည်မှုလျော့နည်းအောင် သင်နဲ့ငါအတူတကွ လိမ်မည်မှုကို တားဆီးပါ။ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18119&ctNode=36622&mp=ifi_my
]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 21 Nov 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18119 【လိမ်လည်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဓိကအကြောင်းအရာ】ကိုဂရုပြုပါ!! ပိုအေးဆေးတည်ငြိမ် စွာ လိမ်လည်မှုလျော့နည်းအောင် သင်နဲ့ငါအတူတကွ လိမ်မည်မှုကို တားဆီးပါ။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 【လိမ်လည်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဓိကအကြောင်းအရာ】ကိုဂရုပြုပါ!! ပိုအေးဆေးတည်ငြိမ် စွာ လိမ်လည်မှုလျော့နည်းအောင် သင်နဲ့ငါအတူတကွ လိမ်မည်မှုကို တားဆီးပါ။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Thu, 21 Nov 2019 16:00:00 GMT-Mon, 21 Nov 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 01 Dec 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-18119 ဖိန်လိကွန်ယက်【ဝေရှောက်ထိုင်ဝမ်ဟောင်ကြားကျိုက်】လှုပ်ရှားမှုစတင်! အမြန်လာ၍ သင့်ရဲ့လှပသောအပြုံးကို မျှဝေကြပါစို့! http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17857&ctNode=36622&mp=ifi_my
]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Wed, 16 Oct 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17857 ဖိန်လိကွန်ယက်【ဝေရှောက်ထိုင်ဝမ်ဟောင်ကြားကျိုက်】လှုပ်ရှားမှုစတင်! အမြန်လာ၍ သင့်ရဲ့လှပသောအပြုံးကို မျှဝေကြပါစို့! 2.16.886.101.20003.20001.32985 ဖိန်လိကွန်ယက်【ဝေရှောက်ထိုင်ဝမ်ဟောင်ကြားကျိုက်】လှုပ်ရှားမှုစတင်! အမြန်လာ၍ သင့်ရဲ့လှပသောအပြုံးကို မျှဝေကြပါစို့! 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Wed, 16 Oct 2019 16:00:00 GMT-Sun, 16 Oct 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Wed, 16 Oct 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17857 အရှေ့တောင်အာရှ အာဖရိကဝက်အပြင်းဖျားရောဂါပြန့်ပွားမှုတုန့်ပြန်၊ ဖိလစ်ပိုင်မှရောက်ရှိလာသောခရီးသည် လက်ဆွဲပစ္စည်းများကိုပြည့်စုံ စွာစစ်ဆေးခြင်း http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17585&ctNode=36622&mp=ifi_my 2.16.886.101.20003.20001.20052 Mon, 19 Aug 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17585 အရှေ့တောင်အာရှ အာဖရိကဝက်အပြင်းဖျားရောဂါပြန့်ပွားမှုတုန့်ပြန်၊ ဖိလစ်ပိုင်မှရောက်ရှိလာသောခရီးသည် လက်ဆွဲပစ္စည်းများကိုပြည့်စုံ စွာစစ်ဆေးခြင်း 2.16.886.101.20003.20001.32985 အရှေ့တောင်အာရှ အာဖရိကဝက်အပြင်းဖျားရောဂါပြန့်ပွားမှုတုန့်ပြန်၊ ဖိလစ်ပိုင်မှရောက်ရှိလာသောခရီးသည် လက်ဆွဲပစ္စည်းများကိုပြည့်စုံ စွာစစ်ဆေးခြင်း 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Mon, 19 Aug 2019 16:00:00 GMT-Fri, 19 Aug 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Mon, 19 Aug 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17585 【ထိုင်ဝမ်ပုံပြင်သစ်】မက္ကစီကိုဘောလုံးနည်းပြရဲ့ခိုင်မာမှု！ကလေးများကိုပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးမရှိ၊ ပိုကောင်းတာပဲရှိ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17546&ctNode=36622&mp=ifi_my
]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 01 Aug 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17546 【ထိုင်ဝမ်ပုံပြင်သစ်】မက္ကစီကိုဘောလုံးနည်းပြရဲ့ခိုင်မာမှု！ကလေးများကိုပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးမရှိ၊ ပိုကောင်းတာပဲရှိ 2.16.886.101.20003.20001.32985 【ထိုင်ဝမ်ပုံပြင်သစ်】မက္ကစီကိုဘောလုံးနည်းပြရဲ့ခိုင်မာမှု！ကလေးများကိုပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးမရှိ၊ ပိုကောင်းတာပဲရှိ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Thu, 01 Aug 2019 16:00:00 GMT-Mon, 01 Aug 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 11 Aug 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17546 【ထိုင်ဝမ်အကြောင်းအရာ ပုံပြင်သစ်】「ကျွန်တော်မှာရှိ、အခြားလူမရှိ」ကျိန့်ရောင်ထျန်း အင်ဒိုနီးရှားမိခင်ဘာသာစကားအနာဂတ်တွင် အလုပ်ခွင်အားသာချက်အဖြစ် ပြောင်းလဲ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17396&ctNode=36622&mp=ifi_my
]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Wed, 03 Jul 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17396 【ထိုင်ဝမ်အကြောင်းအရာ ပုံပြင်သစ်】「ကျွန်တော်မှာရှိ、အခြားလူမရှိ」ကျိန့်ရောင်ထျန်း အင်ဒိုနီးရှားမိခင်ဘာသာစကားအနာဂတ်တွင် အလုပ်ခွင်အားသာချက်အဖြစ် ပြောင်းလဲ 2.16.886.101.20003.20001.32985 【ထိုင်ဝမ်အကြောင်းအရာ ပုံပြင်သစ်】「ကျွန်တော်မှာရှိ、အခြားလူမရှိ」ကျိန့်ရောင်ထျန်း အင်ဒိုနီးရှားမိခင်ဘာသာစကားအနာဂတ်တွင် အလုပ်ခွင်အားသာချက်အဖြစ် ပြောင်းလဲ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Wed, 03 Jul 2019 16:00:00 GMT-Sun, 03 Jul 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 14 Jul 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17396 【ထိုင်ဝမ်တွင်အခြေချစုစည်းနေထိုင်သည့်အကြောင်း】နယူးထိုင်ပေမြို့ ကျုံးဟော် ဟွာရှင်းကျဲ，မြန်မာစတိုင်ဈေးကွက်ကြောင့် လူများအား နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17391&ctNode=36622&mp=ifi_my
]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Wed, 03 Jul 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17391 【ထိုင်ဝမ်တွင်အခြေချစုစည်းနေထိုင်သည့်အကြောင်း】နယူးထိုင်ပေမြို့ ကျုံးဟော် ဟွာရှင်းကျဲ，မြန်မာစတိုင်ဈေးကွက်ကြောင့် လူများအား နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 【ထိုင်ဝမ်တွင်အခြေချစုစည်းနေထိုင်သည့်အကြောင်း】နယူးထိုင်ပေမြို့ ကျုံးဟော် ဟွာရှင်းကျဲ，မြန်မာစတိုင်ဈေးကွက်ကြောင့် လူများအား နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 en Wed, 03 Jul 2019 16:00:00 GMT-Sun, 03 Jul 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 11 Jul 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17391